एन्टिजेन परीक्षण के हो र किन गरीन्छ ? – ThePressNepal
एन्टिजेन परीक्षण के हो र किन गरीन्छ ?
काठमाडौं,चैत २४ । पछील्लो समय पुन कोरोना संक्रमण बढ्न थालेसँगै सरकारले सिमा नाकाहरुमा र काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने ब्यक्तिहरुको एन्टिजेन परीक्षण अनिर्वाय गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । यो परीक्षणले समुदायमा संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न अझै सहज हुने विज्ञले बताएका छन् ।
छीमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै नेपालमा पनि संक्रमित संख्या र दर बढ्दै गएको छ । यो बढ्ने क्रम कम नहुने भन्दै सरकारले सिमा नाकाहरुमा एन्टिजेन परीक्षण गर्नुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने हरेक नागरीककको अनिर्वाय एन्टिजेन परीक्षण गर्न सरकारले आह्वान गरेमो छ । यस्तो गर्दा समुदाय स्तरमा कोरोना महामारी फैलन बाट रोक्न समिने विज्ञहरु बताएछन् ।
एन्टिजेन परीक्षण किन त ?
एन्टिजेन विधि पिसिआर विधि जस्तो ८ घण्टा नलाग्ने र कम लागत र छोटो समयमै संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन सकिने एक माध्यम हो । एन्टिजेनको प्रयोग भिडभाड र ठुलो जन मानसमा परीक्षण गरीन्छ । नालमा कोरोना महामारी सुरु भएसँगै सरकारले पहिले आरडीटि बाट परीक्षण गर्ने गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न त्रुटिहरु भएको भन्दै विवादहरु आएपछि सरकारले परीक्षण नै बन्द गरेको थियो । तर अहिले प्रयोगमा ल्याइएको एन्टिजेनले नतिजा छिटो दिने र सहजै जहाँपनि परीक्षण गर्न सकिने बिज्ञहरुले बताएका छन् ।
एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पनि स्वाव संकलन गर्दा नाक र मुख बाट पिसिआर विधि जस्तै गरेर लिइन्छ । तर पिसिआर विधिको जस्तो आठ दश घण्टा नलाग्ने ३० मिनेट देखि १ घण्टा भित्र नै रिजल्ट दिने चिकित्सकले बताए । यो सहजै र जहाँसुकै परीक्षण गर्न सकिने भएकाले समुदायस्तरमा कोरोना भाइरस कति सम्म फैलिएको छ भन्ने थाहा पाउन र रोकथाम र नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्ने सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेर बहादुर पुनले बताए ।
सरकारले काठमाण्डौंमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण समुदायमा फैलिएको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन तत्काल परिणाम दिने एन्टिजेन परीक्षण सुरु गर्न लागेको हो । काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नेले अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । काठमाडौं जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले सम्बन्धित महारनगरपालिका मार्फत काठमाडौं प्रवेश गर्ने सम्पुर्ण नाकाहरुमा स्वास्थ्य जाँच गरी एन्टिजेन परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एन्टिजेन परीक्षण गर्दा द्रुत गतिमा संक्रमित संख्या पत्ता लगाउन सकिने भएकोले सरकराले कोरोना समुदायस्तरमा जान र भयावह हुन बाट रोक्न सरकारले नयाँ रणनिति ल्याएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।पछिल्लो समय धेरै जसो मानिसहरु भारतबाट विभिन्न नाकाहरु हुदै नेपाल भित्रीने भएकाले सरकारले सिमा नाकाहरुमा हेल्थडेक्सको स्थापना गर्नुको साथै अनिर्वाय एन्टिजेन परिक्षण गरीरहेको छ ।
परीक्षण गर्दा अधिकाशमा पोजेटिभ आएको सम्बन्धीत निकाएको भनाइ छ । यसैले पनि सरकारले फेरी भयावह हुन नदिन समयमा नै सहि कदम चाल्नु आवश्यक रहेको छ ।
Tags: एन्टिजेन कोरोना
Previous राष्ट्रिय प्रविधि पुरस्कार यो बर्ष डा:पुनलाइ
Next दैनिक कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै ,आज २६० जनामा संक्रमण